CAJIIB: Unai Emery Oo Kaliya 12 Cisho Kaddib Isagoo Cadaw Ah Wajihi Kara Kooxdii Caydhisay Ee Arsenal & Qaabka Uu Uga Hor Iman Karo Si Uu Uga Aarsado. - Gool24.Net
December 9, 2019 Apdihakem Omer Adem
Tababarihii dhawaan laga caydhiyay xilka tababarenimo ee kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa dhawaanba isaga oo cadaw ah isla markaana koox kale la safan kahor iman kara kooxdaas.
Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan mid kamida wakhtiyadii ugu xumaa taariikhdeeda soo qaadatay kaddib toddoba kulan oo ay guul la’aan kusoo ahaayeen la shaqaynta Unai Emery.
Saxeexyada cusub ee kooxda ee David Luiz iyo Nicolas Pepe ayaa ku fashilmay inay wax saamayn ah iyo horumarin deg deg ah ku yeeshaan safka kooxda iyadoo ugu dambayn xal aan caydhin ahayn ay u waayeen maamulka kooxdu.
Kooxda haatan saxeexiisa doonaysa lana kulantayba ayaa ah kooxda qudheedu tababare la’aanta ah ee Everton oo shaqadii ka dirtay Marco Silva kaddib markii ay galeen kaalmaha horyaalka lagaga hadho.
Sida uu sheegayo il wareedka Sky Sports, Everton ayaa dalab ka gudbiyay tababare Emery iyaga oo aaminsan inuu dib usoo celin doono qaabkoodii wanaagsanaa.
Sky ayaa intaas ku daraya in heshiis afka ah lagu gaadhay magaalada London xilli horeba iyadoo labada dhinacba ay afeefo iyo heshiisyo horudhac ah sii kala dhiganayaan.
Sidoo kale tababare Emery ayaa la sheegayaa inuu xiisaynayo inuu horumar ku sameeyo luuqadiisa English-ka taas oo caqabad weyn ku ahayd wakhtigiisii kooxda waqooyiga London.
Jamaahiirta Everton ayaan ka xuman doonin Unai oo wakhtiyo adag kusoo qaatay PSG iyo Arsenal kaddib waayihiisii qurxoonaa ee Sevilla, Tababarahan ayaa la aaminsan yahay inuu ku haboon yahay koox Everton oo kale ah oo uu ku helayo fursada uu ku dhisto saf uu ku cabsi gelin karo lixda kooxood ee waaweyn.
Ugu dambayn, Haddiiba ay xantani dhab u bedelanto oo uu Emery qabsado shaqada Goodison Park ayuu Gunners wajihi doonaa kaliya 12 maalmood kaddib oo ah 21-ka bishan December isagoo waliba gegida Toffees ku qaabili kara.